Twingeo bidoro mbipụta nke anọ - Geofumadas
August, 2020 ọtụtụ
Anyị ejiri nnukwu mpako na afọ ojuju bịa na mbipụta nke 4 nke Twingeo Magazine, ugbu a n'oge nsogbu ụwa niile, nke ụfọdụ abụrụla onye ọkwọ ụgbọ ala nke mgbanwe na nsogbu. N'ọnọdụ anyị, anyị na-aga n'ihu na-amụta - na-enweghị nkwụsị - nke uru niile nke dijitalụ dijitalụ na-enye na mkpa nke ntinye nke akụ na ụzụ na ọrụ anyị.
Mgbe ihe karịrị ọnwa 6 na-ebi oria ojoo nke Covid 19, anyị na-ahụkwu akụkọ, ngwaọrụ na ihe ngwọta dabere na ụlọ ọrụ Geospatial maka nyochaa nje. Companieslọ ọrụ dị ka Esri emeela nyocha nke oghere na ngwaọrụ nchịkwa dị gị maka ikpebi mgbasawanye. Ya mere, ekwenye na okwu a bu "Geospatial" di nkpa? Anyi ghotara ike o puru inye?
N'ịmara na anyị abanyela na dijitalụ nke 4, anyị ji n'aka na anyị nwere ike ijikwa ihe niile data geospatial pụtara? Ndi ndị na-eme ihe nkiri na-etinye aka na mmepe nke teknụzụ, njide data, mmezu nke atụmatụ na oru, n'ezie n'ogo nke a? oké mgbanwe?
Ka anyị bido jụọ onwe anyị ma ọ bụrụ na ntọala nke agụmakwụkwọ, a kwadobere Mahadum iji bido ihe ịma aka nke afọ 4 a dijitalụ. Ka anyị cheta ihe a tụrụ anya na ọdịnihu afọ iri atọ gara aga? Ka anyị cheekwa banyere ọrụ ọrụ geosciences na Geomatics taa? Gịnị na-echere anyị n'afọ ndị na-abịanụ? Edebere ajụjụ ndị a niile na tebụl na Twingeo, ọkachasị na isiokwu nke nwere isiokwu gbara ọkpụrụkpụ nke akwụkwọ akụkọ “Geospatial”.
“E nwere usoro mgbawa ihe ọhụrụ. Ugbu a, anyị na-achọ ịhụ otu mmalite ”
E nwere ahịrịokwu dị ụtọ nke dabara na nchegbu ndị anyị kpọtụrụ aha, "Iji mara ebe anyị na-aga, ị kwesịrị ịma ebe anyị si." Ọ bụrụ na anyị dị njikere ịchọpụta, enwere ọtụtụ ọrụ anyị ga-arụ.
Gịnị bụ ọdịnaya ahụ?
Akwukwo ohuru a lebara anya na "Geospatial Ele Ele", ebe a gosiputara otu o siri di ya - ma n’odi ufodu ka esi ele anya ya - mgbanwe nke nkwurita okwu n’etiti mmadu na gburugburu uwa. Otutu n’ime anyi doro anya na ihe anyi n’eme bu ihe ndi mmadu n’agha, bu eziokwu diri na ala anyi anyi bi n’obodo a, nke putara na ihe omuma ndi n’emeputa site na ngwa eji ekwe igwe ma obu ihe ndi ozo n’ekele nwere mpaghara. Ya mere, anyị na-ekepụta oghere gbasara oge niile, nke na-enye anyị ohere ịchọpụta usoro maka ịme mkpebi na ọkwa mpaghara, mpaghara ma ọ bụ nke ụwa niile.
Mgbe ha na-ekwu banyere "Geospatial", ọtụtụ nwere ike isoro ya na Geographic Information Systems GIS, drones, onyonyo satịlaịtị na ndị ọzọ, mana anyị ma na ọ bụghị naanị nke ahụ. Okwu a bu “Geospatial” juputara ihe niile site na usoro ijide data rue na ntinye nke usoro AEC-BIM iji nweta ihe nlebara anya na nkọwaputa oru a. Daybọchị ọ bụla teknụzụ ndị ọzọ gụnyere akụrụngwa geospatial na ngwọta ma ọ bụ ngwaahịa ha, na-eguzobe onwe ya dịka njirimara dị oke mkpa, mana ngwaahịa ikpeazụ ya apụtaghị na maapụ.
N'ihe karịrị peeji 50, Twingeo na-anakọta ajụjụ ọnụ na-akpali mmasị banyere ndị mmadụ site na ngalaba geospatial. Malite na Alvaro Anguix, onye isi Director nke gvSIG Association, onye kwuru okwu banyere "Ebee ka ngwanrọ GIS dị n'efu na-aga".
Ajuju nke n’otu uzo anyi siri nwee ike ịza onwe anyi site na ịga nzukọ ogbako nke mba iri na ise nke gvSIG, ebe anyị bụ akụkụ nke gburugburu ndị ọkachamara na ndị ọkà mmụta banyere ala ndị gosipụtara akụkọ ha nke ọma site na iji ngwa a dị ike. O mere ka ọ pụta ìhè na uto dị ịrịba ama nke obodo gvSIG nweela, otu ihe aka iji ghọta na usoro banyere iji sọftụwia eji arụ ọrụ n'efu na-amụba ka oge na-aga.
"Na mgbakwunye na mgbasawanye nke iji GIS, nke a nwere nsonaazụ doro anya ugbua ugbu a nakwa na n'ọdịnihu dị nso ọ ga-abawanye." Alvaro Anguix
Otu ihe kacha esemokwu gbasara GIS bụ arụmụka gbasara iji sọftụwia emeghị eme ma ọ bụ nke nwere ya, yana uru otu ma ọ bụ nke ọzọ nwere. Nke bụ eziokwu bụ na ihe onye nyocha ma ọ bụ ọkachamara geoscience na-achọkarị bụ na data a ga-eji mee ihe na-agbanwe agbanwe. Dabere na nke a, teknụzụ nke na-enye ngwaọrụ ndị kachasị arụ ọrụ nke ọma iji rụọ ọrụ kachasị nke ọma, aga-ahọrọ, ọ bụrụ na n'aka nke ya, enweghị ikike, mmelite, ụgwọ mmezi yana nbudata a bụ n'efu, ọ bụ mgbakwunye ịtụle.
Anyị na-achọ nkwupụta sitere n'aka ndị mmadụ dịka Wang Haitao, osote onye isi SuperMap International. Haitao tinyere aka na mbipụta nke 4 nke Twingeo iji kpughee nkọwa na echiche nke SuperMap GIS 10i, yana otu akụrụngwa a si enye ọtụtụ uru maka nhazi geospatial data.
"E jiri ya tụnyere ndị na-ere GIS ndị ọzọ, SuperMap nwere nnukwu uru na ọghọm Big Data na teknụzụ 3D GIS ọhụrụ"
Dịka akụkụ nke isiokwu nke akwụkwọ akụkọ ahụ, Jeff Thurston Canadian GIS ọkachamara na onye nchịkọta akụkọ nke ọtụtụ mbipụta nke geospatial, na-ekwu maka "Ọgbọ narị afọ nke 101st: Ewuwu na Ntinye XNUMX".
Thurston na-eme ka mkpa ọ dị maka ntọala ziri ezi nke akụrụngwa dị n'ebe ndị a na-adịghị elele Metropolises, ebe ọ bụ na ndị na-eme ihe nkiri mpaghara n'ozuzu ha na-elekwasị anya na teknụzụ na oghere nke nnukwu obodo site na iwebata: ihe mmetụta, ọgụgụ isi - AI, ejima dijitalụ - Digital Twins, BIM, GIS , na-ahapụ ebe ndị dị mkpa.
"Teknụzụ agafeela ókèala ókè, mana amụma GIS na BIM enwebeghị ike iji ya na mmetụta ha."
Promkwalite uto nke ogige obibi site na mwepụta nke usoro geospatial ọhụrụ nwere ike ịbụ isi ihe iji nweta gburugburu ebe ọgụgụ isi. Anyị nwere ike iche ụwa nke ozi ga-enweta ma mezie ya ozugbo, anyị chere.
Okwesiri ikwuputa na Twingeo na-ekpughere uzo ohuru, mmekota na akụrụngwa nke ndị dike teknụzụ wetara dịka:
Ihe mgbakwunye nke akwụkwọ ọhụrụ na Bentley Institute of Bentley Systems,
Vexcel, weputara UltraCam Osprey 4.1,
N'ebe a na mmekorita ya na Loqate, maka njikarịcha nyefe
Leica Geosystems ya na ngwugwu nyocha laser 3D ọhụrụ ya, yana
Akwụkwọ ọhụrụ sitere na Esri.
Nkwekọrịta dị n'etiti gọọmentị Scottish na PSGA Geospace Commission
N'otu oge, ị ga-ahụ ajụjụ ọnụ nke Marc Goldman Director nke Architecture Engineering na Construction Industry Solutions nke Esri United States. Goldman kwupụtara ọhụụ ya banyere njikọta BIM + GIS, yana uru mmekọrịta a na-eweta na ngbanwe Smart Cities. Nke a abụrụla ajụjụ ọzọ dị n'etiti ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ na ndị na-ahụ maka ịwu ụlọ, olee nke n'ime ha abụọ kacha adabara iji jikwaa data gbasara ya ma gosipụta ya? nsonaazụ kacha mma.
"Ka ijiko ikike BIM zuru oke, a ga-ejikọ ijikọ ọrụ n'etiti BIM na GIS." Marc goldman
N'ọnọdụ ọ bụla, ịmepụta ma ọ bụ nguzobe nke Smart City ma ọ bụ Smart City, chọrọ inye nri na mpaghara ala. Ihe niile dị n’ime ya ga-abụrịrị ụzọ a na - eme ka a mata ihe-ọhụụ, ndị nwere mmetụta na ndị ọzọ-, ha enweghị ike ịbụ usoro dịpụrụ adịpụ ma ọ bụrụ na a ga-emegharị oghere ahụ ka enwere ike ịdị n’ezie.
N'ikwu okwu banyere BIM, ozi ọma bụ BIMcloud dị ka Ọrụ nke ụlọ ọrụ Hungarian GRAPHISOFT, nke amaara maka inye usoro ngwọta site na ARCHICAD ya na-eduga na ngwanrọ, wee kwenye ugbu a n'ịmepụta nyiwe nchekwa data igwe ojii.
"BIMcloud dị ka ọrụ bụ kpọmkwem ihe ndị na-atụ ụkpụrụ ụlọ kwesịrị ịkwaga na-arụ ọrụ site na ụlọ na-enweghị ọkwa ọ bụla."
Ọmụmụ banyere akwụkwọ nke isiokwu a bụ “6 Maka ịtụle na njikọta nke ndekọ ndekọ-Cadastre”. N'ime ya, onye edemede bụ Golgi Alvarez - Onye nchịkọta akụkọ nke Geofumadas-, na-ekwupụta otu ọrụ njikọta n'etiti Cadastre na Ihe Ndekọ Ngwongwo nwere ike ịbụ ezigbo ihe ịma aka maka usoro nhazi nke sistemụ ikike ikike.
N’ịgụ akwụkwọ dị ụtọ, ọ na-akpọ anyị oku ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ banyere nhazi nke sistemu usoro, mgbanwe nke usoro ndebanye, njikọ nke ndebanye aha, na ihe ịma aka ndị a ga-eche ihu n'ọdịnihu.
Onweghi ihe fọdụrụ ma-akpọ gị òkù ka ị gụta agụ a, ma mesie ya ike na Twingeo dị n’aka gị ịnata isiokwu metụtara Geoengineering maka mbipụta ọzọ, kpọtụrụ anyị site na ozi ịntanetị ahụ. editor@geofumadas.com y nchịkọta akụkọ@geoingenieria.com.
Anyị na-ekwusi ike na ugbu a, a na-ebipụta akwụkwọ akụkọ ahụ na usoro dijitalụ - lelee ya ebe a-, ọ bụrụ na achọrọ ya n'ụzọ anụ ahụ maka ihe omume, enwere ike ịrịọ ya n'okpuru ọrụ nke Mbipụta na mbupu na-achọ, ma ọ bụ site na ịkpọtụrụ anyị site na ozi ịntanetị ndị enyere na mbụ. Kedu ihe ị na-eche iji budata Twingeo? Soro anyị LinkedIn maka mmelite ndị ọzọ.
Previous Post«Previous Leica Geosystems webatara ngwugwu nyocha laser 3D ọhụrụ